Uncwadi, ukugqwetha kunye nokuchaneka kwezopolitiko. | Uncwadi lwangoku
Umzekeliso kaMiki Montlló.
Siphila kwixesha lokuchaneka kwezopolitiko. Akukho mntu unokumangaliswa yile ngxelo icacileyo, kodwa ngamanye amaxesha ayonzakalisi ukuyikhumbula. Nangona kwilizwe lethu, ubuncinci kwithiyori, sinenkululeko yokuthetha ixesha elide, kukho uhlobo lokunyanzelwa kwezentlalo, kuba luchuliwe, sibylline, kwaye luneenjongo ezintle, lulingana okanye lulubi kunogogo wakho . Emva kwayo yonke loo nto, ubukade ubona abenzi bokunyanzelwa beza, kwaye ungayenza; kodwa kule mihla Ukuchaneka kwezopolitiko yingcuka eyambethe ufele lwegushaNgendlela yokuba abo badlula koko kwamkelekileyo bagwetyelwe ukubekelwa bucala kunye nokubulawa kwabantu ngokubanzi.
Le meko, nangona ichaphazela onke amagcisa, iyakhathaza ngakumbi kwimeko yababhali, izixhobo zabo zokusebenza ngamagama. Uninzi lwabo kufuneka bahlupheke mihla le kubuninzi boluntu begxeka oko bakuthethayo, nendlela abakuthetha ngayo, kwaye bagwetywa kwaye bayathukwa ngento abangayithethiyo. Le nkcukacha yokugqibela, ebonakala ingabalulekanga, ibaluleke kakhulu. Ibonisa ukuba abantu bayilibele loo nto ubugcisa abukho ngenjongo yokuba "zichanekile" -Kuba sele sinabo uhanahaniso lwasentlalweni mihla le - kodwa ukuphakamisa ubuhle kunye nokoyikeka kwemeko yomntu.
Nangona kunjalo, njengokuba umphefumlo wam ukhona, ndiyakholelwa ukuba ubugwenxa yenye yeempembelelo zokuqala zentliziyo yomntu, enye yezo zinto zinokuqala ukwahlulwa okanye iimvakalelo ezalathisa isimilo somntu ... isenzo sobuyatha okanye esibi, ngenxa yesizathu sokuba azi ukuba akazukuyenza? Ngaba asinakutyekelwa rhoqo, ngaphandle kokugqwesa kwesigwebo sethu, sokwaphula umthetho, kuba nje siyaqonda ukuba 'nguMthetho'?
Umlobi kaEdgar Allan, "Ikati emnyama. "
Kukho isahluko se I-Simpsons apho umlinganiswa abuza khona: Ngaba unokulithelekelela ilizwe elingenamagqwetha? Emva koko, yiba nomfanekiso ngqondweni wakho zonke izizwe zomhlaba ezihlala ngoxolo nemvisiswano. Yintlekisa. Wonke umntu uyahleka.
Ngelishwa siphila kwihlabathi elinamagqwetha, kwaye ukungahoyi loo nyaniso ngumthambo ongenamsebenzi njengoko unethemba. Kwaye ngo magqwetha Ndithetha ngokomfuziselo kuzo zonke izinto ezoyikisayo kunye neentlekele. Ukusuka apha, ndiyaxolisa kuye nabani na okhubekisiwe ngamazwi am, kwaye ufuna ukundikhomba Twitter ukuba bekungafanele ukuba uthuke iqela elithethileyo. Uxolo, kwixesha elizayo ndiza kuxelela ababhali isiqhulo. Ndicinga ukuba abanye benu sele beqondile apho ndiya khona.
Gag ukusuka "Iqela lePop Epic", I-webcomic ye-Bukubu Okawa.
Kule nyaniso ekufuneka sihlale kuyo, akukho zibane kuphela, kodwa kunye nezithunzi, kwaye inyani yokuba sifuna ukungahoyi ayizukubenza baphele. Ngaphakathi entliziyweni yomntu wonke kukho iqula lobumnyama, ubundlobongela kunye nokuzingca okungenangqondo. Uncwadi, olubonakalisa le ntliziyo yomntu, alukhululwanga ebumnyameni, kuba ububi yintsholongwane yokungqubana, kwaye ungquzulwano ngumphefumlo wamabali amakhulu.
Kuyenzeka ukuba uwenze mnandi amabali, kwaye uzame ukuwenza abe msulwa, njengoko kwenzekile kwiintsomi ezininzi ezithandwayo. Kodwa oku ekugqibeleni kuya kubaguqula kuphela babe ngamabali angenabuntu, kwaye nkqu nokuziphatha kubuntu. Ukusuka koloyiko ufunda kwaye, njengoko abanye abantu abadala bekufumanisa kunzima ukuyamkela, nkqu nabantwana banako ukwahlula intsomi kwizinto eziyinyani.
Inguqulelo yoqobo yebali "iHood Red Riding Hood", eqokelelwe kwi "The Sandman: Dollhouse", umdlalo ohlekisayo obhalwe nguNeil Gaiman.
Mlahle umbhali ocacileyo nongcolileyo othi, ngaphandle kokubanga enye into ngaphandle kokuncoma izimvo zefashoni, alahle amandla awafumeneyo kwindalo, ukuze angasiniki nto ngaphandle kwesiqhumiso esivutha ngovuyo kwiinyawo zombutho ophetheyo. […] Into endiyifunayo kukuba umbhali abe yindoda enobuchule, nokuba yeyiphi na inkcubeko kunye nokuziphatha kwakhe, kuba andifuni ukuhlala naye, kodwa ngemisebenzi yakhe, kwaye into endiyifunayo kukuba kubekhona inyaniso kwinto endiyifumanayo; enye yeyoluntu, kwaye kudala kwaziwa ukuba umntu woluntu kunqabile ukuba abe ngumbhali olungileyo. […] Kuyinto yefashoni kakhulu ukuzama ukugweba amasiko ombhali ngokubhala kwakhe; Olu luvo lobuxoki lufumana abaxhasi abaninzi namhlanje kangangokuba akukho mntu unobuganga bokuvavanya umbono.
UMarquis de Sade, "Ukuxabiseka ngenxa yababhali."
Ayisibafundi bodwa abajonga ngakumbi okanye kancinci besazi. Ngelishwa, namhlanje ababhali ngokwabo bayazicikida, nokuba esoyika ukuveza izimvo zakhe ngokukhululekileyo, okanye okubi ngakumbi, ngethemba lokuba imisebenzi yakhe iya kuba "nobuntu" kuluntu jikelele. Kwenzeka ikakhulu, nangona kungenjalo ngokukodwa, phakathi kwababhali abatsha ngenxa yokoyika ukungaqondwa kakuhle okanye ukuzenzela igama elibi. Kwaye, kutheni ungatsho, phakathi kwabo bafuna ukwandisa ukuthengisa kwabo.
Oku kuzalwe amaxesha amaninzi ukusuka ku impazamo ebanzi: Chonga umbhali ngomsebenzi wakhe okanye omnye wabalinganiswa ovela kuwo. Umzekelo, ukuba umlinganiswa ophambili kwinoveli ubulala umfazi akunyanzelekanga ukuba abonise ukuba umbhali ufuna ukwenza njalo. Uzikhawulela ekuboniseni inyani yokuba, nokuba siyathanda okanye asithandi, ikhona, kwaye inokukhokelela kwibali apho umcuphi osemsebenzini kufuneka akhuphe umbulali. Ngendlela efanayo, ukuba umlinganiswa uneempawu ezithile ezibonakalayo, ezinje ngomntwana onyawo, oko akuthethi ukuba umbhali wabelana ngayo. Emva kwayo yonke loo nto, sibhala malunga nezinto esizithandayo kuba ziyasithanda, kodwa into esingayithandiyo inesibheno sayo esinokusikhuthaza.
Ngamafutshane, ndingathanda ukukhuthaza bonke ababhali phaya, beqweqwedisa iingqondo zabo kwimibhalo-ngqangi yabo, ukuba bangaphazamisi ubuchule babo; kakuhle yimbali ekhetha umbhali, hayi ngenye indlela. Kwaye kunjalo nantoni na oyibhalayo izakukhubekisa umntu.
"Ndingachaza izembe elingena kwikakayi lomntu ngeenkcukacha ezinkulu, ezicacileyo kwaye akukho mntu uya kuqhwanyaza. Ndinikezela ngenkcazo efanayo, ngeenkcukacha ezifanayo, lobudoda obungena kwilungu lobufazi, kwaye ndifumana iileta malunga nalo kwaye abantu bafunga. Ngokoluvo lwam oku kuyaphazamisa, kuyaphambana. Ngokusisiseko, kwimbali yelungu lobudoda elingena kwilungu lobufazi linike ulonwabo kubantu abaninzi; izembe eziya kukhakhayi, ewe, hayi kangako.
UGeorge RR Martin.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Uncwadi, ukugqwetha kunye nokuchaneka kwezopolitiko.
IPiper valca sitsho
Andivumelani kwaphela nolunye uluvo kweli nqaku. Okokuqala, njengombhali endinguye, andinakuyicinga xa sazibeka kwinqanaba lesikali kwaye sanikwa amandla okwazi ukunyathela isidima sabanye abantu. Ewe kukho inkululeko yokuthetha, kodwa, njengawo onke amalungelo, oku kuyaphela xa amalungelo abanye eqala.
Ke ngoko, ukunqongophala kolwazi ngombhali weli nqaku kuyabonakala xa unika umzekelo ukubulawa kwabantu basetyhini njengenxalenye yesiqwenga senoveli. Ingxaki apha ayikokufa kwabasetyhini (bekuya kuba yinto engaqhelekanga ukuba bekungekho mntu ubhubhileyo ebalini), ingxaki iyavela xa umbhali echaza umbono wakhe wobundlobongela / wobuhlanga / wobundlobongela, njl njl ebalini kwaye eqhubela phambili kwigunya lokuyinika isininzi.
Ndiza kuyishwankathela ngesivakalisi esinye: ibizwa ngokuba yintlonipho.
Phendula uPiper Valca
Molo ngale ntsasa, uPiper Valca. Ndiyaluhlonipha uluvo lwakho, nangona nam ndingabelani nalo. Ndicinga ukuba uhlala kunye ne-anecdotal yenqaku xa elungiselela olu luvo, hayi ngeziyobisi.
Ndiqokelela ukuba kufanele ukuba ukhubeke ngokunzulu yimisebenzi enje "ngamadoda abathanda abafazi" nguStieg Larsson, okanye ukuthatha umzekelo oqhelekileyo, intlekele kaEuripides "iMedea." Ndingathanda ukukukhumbuza, nangona ngokuqinisekileyo kungafuneki njengombhali wenoveli, ukuba le fiction yenye into, kwaye inyani yenye into. Ukuthi umbhali achaze iinyani ezithandekayo kunye nabalinganiswa akuthethi ukuba uyavumelana neziganeko ezinjalo kunye nabantu abathile.